Kumba | Yuyue
Type C Kudzvinyirira Station
4K HD odhiyo uye vhidhiyo kuwiriranisa.
Iyo yakazvipira kupa vashandisi neyaka-yese-yedhijitari yekuwana mhinduro. Zvigadzirwa zvinosanganisira komputa peripheral ekuwedzera akatevedzana, nhare inofambiswa yekufambiswa yakatevedzana, dijitoreniki yekufambisa dheti yakatevedzana, USB2.0 / 3.0 / 3.1 usb-c danho rekuteedzera, SlimPort yekufambisa nateedzana, HDMI muparadzi wekuteedzera, nezvimwe.
Rechargeable mwenje mwenje wakarembera Neck USB kuchaja Mini Fan
Rechargeable mwenje mwenje wakarembera Neck USB kuchaja Mini Fan , , Kamwe ikazara zvakakwana, bhatiri rinogona kushanda kwemaawa 2-8. 3 Inochinjika Yekumhanya: Yakaderera / Pakati / Yakakwira mameturu maseru anosangana ako akasiyana mhepo kumhanya zvinodiwa. Iyo yekumusoro yepamusoro mhepo inomhanya mweya pa5.9M / S! Feature: 1. Ruoko Rwemahara & Headphone Dhizaini: Paunenge uchifamba, iwe zvechokwadi haudi kubata fan, Yakasarudzika ruoko rwemahara uye headphone dhizaini, nokudaro iwe unogona kusungirira fan iri pamutsipa wako. 2. LED + 360 ° Rotatable Double Fan, Double Kutonhorera: Nemhando inowirirana yeOD, Inokodzera zvemitambo / kuverenga husiku.Iyi fani yebhandi inogona kugadzirisa chinongedzo che360 °, Iyo inokutendera iwe kuti uwane yakaringana mhepo kutungamira. 3. 3 Inogadziriswa Yekumhanya Nhanho: Iyo faniri blade dhizaini-shizha dhizaini, mhepo ine simba zvakanyanya. Mazhinji mafeni pamusika akagadzirwa nemashizha matatu emashizha.Mhepo idiki kwazvo uye Ruzha ruzha.Iyi ruoko rwemahara rusununguko fani ine yakaderera / yepakati / yakakwira 3 inomhanya nhanho. 4. USB Rechargeable Fan: Yakavakirwa-mukati inogona kuchinjika 2000mAh lithium bhatiri, unogona kuchaja fan kuburikidza ne USB tambo. Uye tambo ye USB inouya ne fan inowirirana nechero chiteshi che USB, senge komputa, malaptop, simba bhengi, uye yakajairika socket zvichingodaro. 5. Wide Chikumbiro & Waranti: Iyi fan inotakurika yakanakira kutonhorera kwega, hofisi, zviitiko zvekunze, senge musasa, nzendo, kukwira makomo, kukwira nekuona mitambo etc. Kune vanhu vane vhudzi refu, ndapota sunga bvudzi paunenge wakapfeka feni kuti ridzivirirwe kuti risamutsirwe mufeni. Ongorora: Iyo package ine rechargeable fan, USB kuchaja tambo, mushandisi bhuku, hapana yakakosha mafuta / pefiyumu. Usati washandisa feni yebhandi inotonhora, ndapota ita chokwadi chekusunga bvudzi refu kuti urege kukuvara Chigadzirwa Chigadzirwa: Chigadzirwa Chinyorwa: ABS Plastiki uye Silicone Saizi yechigadzirwa: 190 * 230 * 30mm Dhizaini: $ 3 magadzirirwo Chiedza Gear: 2 Kubhadharisa Input: DC5V 1A Nguva yekuchaja: 3 Maawa Bhatiri Muenzaniso: 18650-3.7V 2000MAH Motokari: DC Brushless mota Kurema: 185g Chimiro: USB Neck Yakarembera Fan Chipo che: Shamwari (Bhavhadhe. Kisimusi. Gore Idzva Rinopa) Range rekushandisa: kumba / chikoro / hofisi / kunze Kugadziriswa kwechigadzirwa: Usaise minwe yako mu fan, Vana vari pasi pemakore matanhatu vanofanirwa kubatsirwa nemuchengeti. 1.Kurembera dhizaini: Yakasarudzika yakarembera mutsipa dhizaini, yakasiyana neye yapfuura dhizaini dhizaini, iyo fan fan inogadzikana, inogona kutakurwa kutenderedza, uye iyo inoshanduka mwenje inoita kuti iwe uwedzere kutarisa-meso kana uchifarira kutonhorera kweiyo fan Iyo inofanirwa-kuve yezhizha 2. Kushandiswa kunochinja: Iyi diki yakaturika fan fan inogona kupetwa, saka iwe une nzira dzakasiyana dzekuishandisa, musoro weiyo fan unogona kushandurwa 360 degrees. (1) Inogona kusungirirwa muhuro (2) Chinja chimiro chayo, chiise patafura woishandisa (3) Inogona zvakare kushandiswa paruoko. 3.Adjustable mhepo kumhanya: (2) Svikiro repakati: Zororo rinouya kuzobvisa kupisa (3) Yekumhanyisa mhanyisa: Yakasimba mhepo kumhanya, nguva dzakanaka dzinouya kwauri 4.Mhando dzemashiripiti mwenje mwenje dze LED: Iyo yakasarudzika dhizaini yemwenje ye LED inokutendera kuti unakidzwe nekutonhorera uchikwezva kutarisa Kune mavara mana emurarabungu, uye kune mwenje wakachena wakajeka kuti uvhenekere. Unogona kusarudza pakati pema modes maviri. 5. USB rechargeable fan: Yese kuchaja kunogona kushanda kwemaawa 2-8. Zviri nyore kutakura chero kupi uye chero nguva. Sarudzo yakanaka yeZuva reChikoro, Chipo chekuzvarwa.
Chiedza Kurema 3 Muna 1 Type C Bendable USB Kutengesa Mini Fan
Chiedza Kurema 3 Muna 1 Type C Bendable USB Kutengesa Mini Fan Yakasarudzika Logo Inopa Mini 2/3 Mune 1 Type C Android IPhone Inotakurika Fani Ye Smartphone Ese mamodheru ane: Android maficha, iyo Apple interface, Android + USB, Apple + Android. Chigadzirwa zita: 2 in1 foni mini fan / 3 mune 1 foni mini fan / mini foni fan Saizi: 9cmx3.8x4.3cm Voltage: 5V Simba: 1W Ruvara: Chena, Dema, Dzvuku, orenji, Girinhi, Bhuruu Zvinyorwa: TPE + ABS Paking Dhata: PP bhegi yechinhu chimwe nechimwe Chigadzirwa Tsananguro: Ye IPhone5 / 5S / SE / 6 / 6S / 6S Plus / 7/7 Plus / 8 / 8Plus / X _ Muchena, orenji, Girinhi, Pinki, Dema, Bhuruu, mazhinji mavara sarudzo 100% nyowani uye yepamusoro mhando Motokari kumukira 16000 kutendeuka Mota inogona kushanda uchienderera mberi100 + maawa TPE kuchengetedza zvinhu zvakatipoteredza Hapana bhatiri, Ingori USB / Micro USB / Mheni / Type-C Magetsi Yakasarudzika dhizaini dhizaini, Iine zvakare huremu huremu Mhepo Yakasimba, Ruzha Rwepasi uye Kuchengetedza Simba Yakareba nguva yekushanda ine yakaderera simba kushandiswa Inotakurika, yakaderera ruzha, hunovimbiswa mhando nehurefu hwekushanda hupenyu
Handheld Husiku Mwenje Yakapetwa USB Yekuchaja Mini Fan
Handheld Husiku Mwenje Yakapetwa USB Yekuchaja Mini Fan , Inotakurika USB Rechargeable LED Mini Fans Yakagadzira Runhare Kubata Sucker Fan , Kamwe ikazara zvakakwana, bhatiri rinogona kushanda kwema 2-3 maawa. 2 Inogadziriswa Yekumhanya: Yakaderera // Yekumhanyisa marongero anosangana ako akasiyana mhepo kumhanya zvinodiwa. Iyo yekumusoro yepamusoro mhepo inomhanya mweya pa5.9M / S! Feature: 1. Nyanzvi inotakurika fan pamwe nekubatanidzwa kwekugadzira, kutaridzika kuri nyore uye chimiro chakasimba. 2. USB rechargeable sucker fan ine yekupeta yekukweva kapu foni inobata, akangwara kutonga system, yakavimbika mashandiro, ayo anoshanda zvizere uye nyore kushanda 3. Uchishandisa iyo yepasi rose chiyero chinzvimbo lithiamu bhatiri (Inosanganisirwa), iyo inogona kudzokororwa uye kubhadhariswa ne USB charger, komputa uye simba bhangi 4. Yakasarudzika inotakurika fan dhizaini, yekugadzira dhizaini, yakagadzirwa nemhando yepamusoro ABS + Silicone, ine yakasimba dhizaini uye kumanikidza. 5. Multi kumhanyisa simba rinogadziriswa fan, dzima kana kudzima mweya neinosiyana-siyana kumhanya tekinoroji, inoshanda uye chengetedza simba. 6. USB Rechargeable Fan: Yakavakirwa-mukati inogona kubhadharwa 800mAh lithium bhatiri, unogona kuchaja fan kuburikidza ne USB tambo. Uye tambo ye USB inouya ne fan inowirirana nechero chiteshi che USB, senge komputa, malaptop, simba bhengi, uye yakajairika socket zvichingodaro. Ongorora: Iyo package ine rechargeable sucker fan, USB kuchaja tambo, mushandisi bhuku, hapana yakakosha mafuta / pefiyumu Usati washandisa fan fan, ndapota ita chokwadi chekusunga bvudzi refu kuti urege kukuvara. Chigadzirwa Chigadzirwa: Chigadzirwa Chinyorwa: ABS Plastiki + Silicone Dhizaini: $ 2 magadzirirwo Kubhadharisa Input: DC5V 1A Nguva yekuchaja: 3 Maawa
Inotsikika Runhare Inobata 2000 MAh USB Kuchaja Mini Fani
Inotsvaga Runhare Inobata 2000 MAh USB Kuchaja Mini Fan , , Kamwe ikazara zvakakwana, bhatiri rinogona kushanda kwemaawa 2-6.5. 3 Inochinjika Yekumhanya: Yakaderera / Pakati / Yakakwira mameturu maseru anosangana ako akasiyana mhepo kumhanya zvinodiwa. Iyo yekumusoro yepamusoro mhepo inomhanya mweya pa5.9M / S! Feature: 1.Iye nyanzvi inotakurika fan pamwe nekubatanidzwa kwekugadzira, kutaridzika kuri nyore uye chimiro chakasimba. 2. USB rechargeable tafura feni ine inowoneka foni mubati, akangwara kudzora system, yakavimbika mashandiro, ayo anoshanda zvizere uye ari nyore mashandiro. 3. Uchishandisa iyo yepasi rose chiyero chinzvimbo lithiamu bhatiri (Kunze), iyo inogona kudzokororwa uye kubhadhariswa ne USB charger, komputa uye simba bhangi. 4. Yakasarudzika inotakurika fan dhizaini, yekugadzira dhizaini, yakagadzirwa yemhando yepamusoro ABS, ine yakasimba dhizaini uye kumanikidza. 5. Multi kumhanyisa simba rinogadziriswa fan, dzima kana kudzima mweya neinosiyana-siyana kumhanya tekinoroji, inoshanda uye chengetedza simba. 6. USB Rechargeable Fan: Yakavakirwa-mukati inogona kuchinjika 2000mAh lithium bhatiri, unogona kuchaja fan kuburikidza ne USB tambo. Uye tambo ye USB inouya ne fan inowirirana nechero chiteshi che USB, senge komputa, malaptop, simba bhengi, uye yakajairika socket zvichingodaro. Ongorora: Iyo package ine rechargeable fan, USB kuchaja tambo, mushandisi bhuku, hapana yakakosha mafuta / pefiyumu. Usati washandisa fan fan, ndapota ita chokwadi chekusunga bvudzi refu kuti urege kukuvara. Chigadzirwa Chigadzirwa: Chigadzirwa Chigadzirwa: ABS Plastiki Dhizaini: $ 3 magadzirirwo Kubhadharisa Input: DC5V 0.8A Nguva yekuchaja: 2.5 Maawa Kushanda nguva: yakaderera kumhanya, 6.5hours, yepakati kumhanya, 3.5 maawa, yakakwira kumhanya, maawa maviri Bhatiri Muenzaniso: 18650-3.7V 2000MAH Motokari: DC Brushless mota Chimiro: USB Desk Feni Ine Inogona Kuwanikwa Nhare Yekubata Chipo che: Shamwari (Bhavhadhe. Kisimusi. Gore Idzva Rinopa) Range rekushandisa: kumba / chikoro / hofisi Kugadziriswa kwechigadzirwa: Usaise minwe yako mu fan, Vana vari pasi pemakore matanhatu vanofanirwa kubatsirwa nemuchengeti.
Yedu Kambani yakazvipira kuna R
& D zvigadzirwa, zvakagutsa zvinodiwa nevatengi vedu.
Yedu yezvigadzirwa mhando vimbiso ndeye 12 mwedzi.
Boka redu rebasa rinopindura kubvunza kwako mukati memaawa maviri.
Yedu OEM / ODM kugona:
Pamusoro pegumi nemazana mashanu squre mita fekitori, vanopfuura makumi mashanu vashandi vane hunyanzvi, maviri emisara mitsara, maviri sevhisi Injection yekuumba michina, maviri seti yakakurisa frequency muchina, imwe seti yemuchina wekukwevera, 2 set ye soldering poto, uye digital smart waya waya. , Pneumatic stripper. Mwedzi wega wega inodarika zviuru makumi matatu.
Shenzhen Yuyue Electronic Technology Co, Ltd yakavambwa muna2009, inyanzvi mu USB HUB, TYPE-C Docking Station
& Network Adapter.Over makore gumi nemaviri ekugadzira chiitiko, chave chigadzirwa chikuru mundima iyi.
Iyo yakakwira-tech bhizinesi inobatanidza kutsvaga nekuvandudza, dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Iyo yakazvipira kupa vashandisi neyaka-yese-yedhijitari yekuwana mhinduro. Zvigadzirwa zvinosanganisira komputa peripheral ekuwedzera akatevedzana, nhare inofambiswa yekufambiswa yakatevedzana, dijitoreniki yekuparadza yedzidziso, USB2.0 / 3.0 / 3.1 usb-c danho rekuteedzera, SlimPort yekufambisa nateedzana, HDMI muparadzi wekuteedzera, nezvimwe.
KANA uine MIMWE MIBVUNZO, Nyora kwatiri